Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ဒို.အရေး၊ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ဒို.အရေး၊ဗမာစစ်အစိုးရ၊ဖြုတ်ချရေး၊ဒို.အရေး၊
နှစ် တုန်းက ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ.မှာလည်းနအဖတပ်ခမရ (၃၅၀)စစ်သားတစ်ယောက်ကကရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမုဒိမ်းကျင့်ပြီးသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခဲ့ခြင်း၊ကျွဲနွားများကိုပစ်သ တ်ပြီးအရက်နဲ.ပျော်ပါးစားသောက်ခဲ့ခြင်းတွေကိုစော်ကားခဲ့လေသည်၊ဒီနှစ်မှာကျတော့၊ဗုံဖောက်ဖျက်စီးခဲ့ပြန်သည်၊
အခုမွန်အမျိုးသားနေ.မှာလည်းကြော်ညာစာသားများကိုဖြတ်တောက်ခိုင်းခြင်း၊နည်းမျိုးစုံဖြင့်လိုက်လံခြိမ်းခြောက်နေခြင်း၊အမျိုး သားနေ.အဆင်ပြေချောမောမဖြစ်အောင်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊အမျိုးသားနေ.င်္ကျီရောင်ချတဲ့မွန်လူငယ်များနှင့်ကျောင်းသားများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေခြင်းစတဲ့စော်ကားချက်များကိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်၊
တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုခြိမ်းခြောက်နေကြောင်းထင်ရှားသည်၊ပြည်သူလူထုတွေနဲ.လည်းစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားသည်၊အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်လိုတဲ့ဆန္ဒမရှိ၊တိုင်းပြည်ကိုစာနာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်စစ်တပ်တိုင်းပြည်အဖြစ် ထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်၊
တိုင်းရင်းသားများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုမလိုလာတဲ့သဖြင့်အမြဲသွေးထိုးရန်တိုက်ပေးနေသည်၊ကရင်အမျိုးသားအချင်းချင်း ရန်တိုက်ပေးခြင်း၊ကချင်နှစ်ဖွဲ.၊ရှမ်းနှစ်ဖွဲ.၊မွန်သုံးဖွဲ.၊စသည့်အမွှားမွှားအပြားပြားဖြစ်အောင်ဖန်းတီးထားပါသည်၊သူတို.၏စစ်ဗျု ဟာအခေါ်အဝေါ်အရ ဘေဒဥပါယ်လို.ခေါ်သည်၊ဒါပေမဲ့၊ပညာရှင်တို.၏အခေါ်အဝေါ်အရ ညစ်ပတ်တဲ့အကျင့်ဗျူဟာဖြစ်သည်၊ အကြောင်းကတော့၊တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့်ဗမာလူမျိုးများသည် သူများမဟုတ်ပါ၊တစ်ပြည်ထဲနေ၊တစ်ပြည်ထဲမွေး၊တစ်ပြ ည်ထဲသေရမည့်သူများသာဖြစ်သောကြောင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်နေသည်၊ထို.ကြောင့်၊ယင်းကဲ့သို.ဗျူဟာမျိုးကိုကိုယ့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအကြားသုံးစွဲလိုက်ခြင်းသည် အင်မတန်မှအောက်တန်းကျယုတ်မာတဲ့ဒေဝဒတ်မင်း၏အကျင့်ကိုကျင့် သုံးသူများဖြစ်သောကြောင့်ညစ်ပတ်တဲ့ဗျူဟာလို.ပညာရှင်တို.ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့သည်၊ကိုယ်.ညီအစ်ကိုမောင်နှမအချင်းချင်းသွေး
ထိုးရန်တိုက်ပေးနေခြင်းဟာ တိုင်းပြည်ကိုဖြိုကွဲနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊တစ်ပြည်ထဲမွေးတိုင်းသူပြည်သားများကိုစော်ကားနေခြင်း ပင်ဖြစ်ပေသည်၊
သို.သော်၊ဒို.တာဝန်းအရေးသုံးပါးမှာတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊ဒို.အရေးလို.အော်ထားသည်၊သဘောကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ၊ဗမာစစ်အစိုးရအနေနဲ. တိုင်းရင်းသားတို.၏တန်ပြန်စစ်ပွဲကိုယာယီတားဆီးနိုင်ရန်သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည်၊ တစ်ဖက်မှာမူ၊တိုင်းရင်းသားတို.၏အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများကိုပပျောက်အောင်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေသည်၊တိုင်းရင်း သားတို.၏အမျိုးသားလက္ခဏာနှင့်အမျိုးသားအင်းအားလျော.ပါးလာတဲ့နေ.တစ်နေ.မှာ ယင်ဒို.တာဝန်းအရေးသုံးပါး၏ကြွေးကြော်သံနှင့်ဆိုင်ဘုတ်များဟာ ဗမာပြည်မပြိုကွဲရေး၊ဒို.အရေး၊ဗမာလူမျိုးများစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ဒို.အရေးနှင့်ဗမာအာဏာ စက်များရာသက်ပန်းတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ဒို.အရေးကြွေးကြော်သံများသို.ပြောင်းအော်မည်ဆိုတာကိုသေချာပေါက်ဖြစ်ပေသည်၊
ထို.ကြောင့်၊တစ်ပြည်ထဲမွေးတစ်မြေထဲနေတစ်ရေထဲသောက်ပြည်သူလူထုများအနေနဲ.ဗမာစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို.အချိန်တန် နေပြီဖြစ်သည်၊တိုင်းရင်းသားများအနေနဲ.လည်းစစ်အစိုးရ၏အကြိမ်ပေါင်းထောင်နဲ.ချီပလီပလာအလိမ်ဥာဏ်များ၏ဒဏ်ကနေ ရုန်ထွက်ဖို.အချိန်ရောက်နေပြီးဖြစ်သည်၊လက်ရှိဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များဦးဆောင်သောဗမာစစ်တပ်သည်တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ကောင်းလို.ကောင်းလို.အောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘဲ အလိမ်ဥာဏ်သုံးပြီးကောက်ကျစ်စဉ်းလဲယုတ်ကန်လို.အောင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပေသည်၊
သမိုင်းတွေကိုပြန်သုံးသပ်ကြပါ၊လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေဖြင့်လိမ်ညာခဲ့လို.ဗမာပြည်မတ ည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ပထမဦးဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၅၆ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲသည် ညီညွတ်သောဖဆပလပါတီက (၅၃.၂)၊မဲဆန္ဒနယ်(၁၃၅)နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်၊သို.သော်၊ရွေးကောက်ပွဲ၏ရလာဒ်ဟာကံမကောင်းစွာဖြင့်သက်တမ်း(၂)နှစ် လောက်သာရှည်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်မှုအကြောင်းပြချက်နဲ.ဦးနုကဦးနေဝင်အားအိမ်စောင့်အစိုးရတာဝန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့သည်၊
ဗိုလ်နေဝင်ဦးဆောင်သောအိမ်စောင့်အစိုးရကနေ(၁၉၆၀)ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ့ပြန်ပေသည်၊ဤရွေးကောက်ပွဲသည်မဲပုံတွေကိုဖောက်ပြီးမဲခိုးဝှက်ခဲ့သည်၊ ၁၉၅၆ တုန်းကရွေးကောက်ပွဲသည်မဲပေးနိုင်သူပေါင်း (၃၃၄၀၂၀၀)ရှိရာကနေ(၁၉၆၀)ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်မဲပေးနိုင်သူပေါင်း (၅၅၁၃၈၉၅)ဖြစ်သွားတာဟာကမ္ဘာကအံ့သြခဲ့လေသည်၊ပြောချင်တာကတော့၊(၄)နှစ်အတွင်မှာမဲပေးနိုင်သူ(၆၅)ရာခိုင်နှုန်း
ဖြစ်ပါသည်၊ဤကဲ့သို.လိမ်လည်လှည့်ပတ်လာပြီးဦးနုကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြန်သည်၊တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ.လည်းဥပဒေ ဘောင်အတွင်းအမျိုးသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်များလုပ်လာပြန်သည်၊ပေးသလိုလို၊မပေးသလိုလိုလုပ်ပြီးတော့(၄)နှစ် ကြာလာသော် (၁၉၆၂)ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲရေးဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရခြင်းဆိုပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့သည်၊
ဤအာဏာသိမ်းပွဲသည်ရက်စက်ပြီး အစီစဉ်ရှိရှိလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းပွဲဖြစ်သည်၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များကို
အချုပ်အားဖြင့် ပြန်သုံးသပ်သော်၊ ၁၉၄၈လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဗမာတစ်ကျပ်၊တိုင်းရင်းသားများတစ်မတ်(သို.)တန်တူရည်တူအခွင့်အရေးမရရှိခဲ့လို.ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်လောင်ခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားတပ်အင်းအားများတောင့်တင်းခဲ့သည်၊ကရင်တပ်ကအင်စိန်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားနှင့်မွန်တပ်ကမော်လမြိုင်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားသို.ရောက်ရှိခဲ့သည်၊ဗမာစစ်အစိုးရကြောက်ရွံ.လာကနေအသိအမှတ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေသို. ရောက်ရှိခဲ့လေသည်၊ဤအချက်သည်တိုင်းရင်းသားတပ်တို.၏တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်၊ဒါကြောင့်၊ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိ မ်ချမ်းရေးလဲလှယ်ပွဲဆိုပြီးဗမာလူလိမ်ခေါင်းဆောင်တွေက ကြွေးကြော်သံလုပ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်ေ တွေကိုလိမ်လည်စည်းရုံးခဲ့သည်၊၁၉၆၀ မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးသည်၊သို.သော်၊မဲပုံဖောက်ပြီးခိုးဝှက်ရာကနေ
အနိုင်ယူခဲ့သည်၊အနိုင်ရတဲ့ဦးနုခေါင်းဆောင်သောသန်.ရှင်းဖဆပလကိုအိမ်စောင့်အစိုးရဦးနေဝင်ကအာဏာလွှဲပြောင်းပေးလို က်သည်၊သိုသော်၊များမကြာခင်မှာပင်၊ ၁၉၆၂ မှာအာဏာသိမ်းခဲ့ပြန်သည်၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကလက်နက်လည်း ကုန်၊ကိုယ့်နိုင်ငံရေးပါတီလည်းရှုံး၊ကိုယ့်လူတွေကလည်းထောင်မှာထမင်းနီ၊ဟင်းပူးတွေနဲ.ဘဝများသို.ရောက်ရှိခဲ့ရလေသည်၊
တဖန်၊၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာဦးနေဝင်၏တစ်ပါတီစနစ်ကိုကျင့်သုံးသောမဆလပါတီကြောင့်တိုင်းပြည်၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဒ ဏ်ကိုမခံနိုင်လို.ပြည်သူလူထု၏အုံကြွမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို.ပြောရသည်၊ဤရွေးကောက်ပွဲလည်းအနိုင် ရတဲ့ပါတီများကိုနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲမပေးခဲ့အပြင် ထောင်ထဲသို.ပို.ခံလိုက်ရပြန်သည်၊တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများဖျက် သိမ်းခံခဲ့ရလေသည်၊သို.သော်၊လက်နက်များဆုံးရှုံးမှုမရှိခဲ့ပါ၊
တစ်ဖက်မှာမူ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်းအားစုများသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစုဖြင့်အင်းအားတောင့်တင်း
လာပြန်သည်၊စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပွဲကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေဒေသသို.ရောက်ရှိလာသောကျောင်းသား အင်းအားလည်းထပ်တိုးလာပြန်သည်၊ဒီတစ်ခါကျတော့၊ဗမာစစ်အစိုးရအတွက်တိုင်းရင်းသားများကိုစစ်ရေးအရအနိုင်ယူချင် သည် အန္တရာယ်ကြီးလှသည်၊ထိုကြောင့်၊ငြိမ်ချမ်းရေးစကားနှင့်သွေးထိုးဖြိုခွဲရေးတိုက်ပွဲဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည်၊ငြိမ်ချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ၊ဥပဒေဘောင်အတွင်းသို.ဝင်ရောက်ခြင်း၊လက်နက်နဲ.ငြိမ်ချမ်းရေးလဲလှယ်ခြင်းစတဲ့စကားလုံးများကိုသုံးပြီးစည်းရုံး ခဲ့ပြန်သည်၊တစ်ချို.ကတကယ်ယုံကြည်လို.ငြိမ်ချမ်းရေးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးတဲ့တပ်ဖွဲ.များရှိသလိုအဖက်အဖက်အရပ်ရပ်
နောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလမှာပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာ ရတဲ့နည်းဖြင့်စစ်တပ်အနိုင်ယူမည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်၊ပြိုင်တူမဲ့စစ်တပ်ပိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ပေါ်လာလိမ္မယ်.၊မဲဆန္ဒနယ် မြေအနဲငယ်မှာအနိုင်ရမည်.နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအတိုက်အခံလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိအောင်(သို.)လုပ်လို.မရအောင်စစ်တပ်အင်းအား ဖြင့်ဖိနှိပ်ထားမည်၊မဖိနိုင်ရင်နောက်တစ်ဖန်အာဏာသိမ်းပွဲထပ်ပေါ်ပေါက်မည်၊တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများအတွက်တော့၊ ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်မည်၊ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်ဟု ဝါဒဖြန်.လို.ရအောင်၊နိုင်ငံတကာ၏အသိအမှတ်မပြုခြင်းအနေအထား ကနေတားဆီးလို.ရအောင်အဖြစ်သာရှိနေရမည်၊အင်းအားနဲတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတစ်ချို.လက်နက်အင်းအား ဆုံးရှုံးမည်၊ခေါင်းဆောင်ပိုင်များကျတော့အမှုကွက်ဆင်ခံရပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်သည်၊လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုခံရနိုင်သည်၊ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်၊အရောင်မပြောင်း၊အသွင်းမပြောင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်းအားစုများအတွက်တော့၊ထိုးစစ်ခံရ နိုင်သည်၊ထိုးစစ်ဆင်မည့်တပ်အင်းအားဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်(သို.)နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်းပြောင်းသွားသောတိုင်းရင်းသား
ရန်သူဘေးအန္တရာယ်မှန်သမျှကနေကင်းလွန်နိုင်ရန်အတွက်တိုင်းရင်းသားအင်းအားစုများနှင့်တစ်မြေထဲမွေးပြည်သူပြည်သား များအနေနဲ. တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ဒို.အရေး၊ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ဒို.အရေး၊ဗမာစစ်အစိုးရဖြုတ်ချရေး၊ဒို.အ ရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံများကို တကယ့်ရင်ထဲကနေအော်ဟစ်ပြီးလက်တွေ.လုပ်ဆောင်နိုင်မှသလျှင်ကင်းလွတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါ ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ဗမာစစ်အစိုးရ၊ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းများသည် မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီသမားများကိုရည်စူပါသည်၊ဗမာလူမျိုးအားလုံးကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊အကြောင်းကတော့၊ထို.
ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်